Ixesha kunye nabahlobo 53
Isayensi elungileyo ayichazi ukuba yintoni i-gravitation kwaye, kwaye iyavuma ayazi. Iinyani, nangona kunjalo, eziqwalaselwe zizazinzulu, nezithi zibizwe ngokuba ngumxhuzulane, zichaziwe ngokufutshane, ukuba kukho ukutsalwa okuthi wonke umzimba unawo kuwo onke amanye amalungu ngokobunzima bawo, kwaye nokuba namandla okutsala kuncitshiswa ukunyuka komgama phakathi kwemizimba kwaye andiswa nokusondela kwawo. Ukulandelelana kwezibakala, okubizwa ngokuba ngumxhuzulane, kuyazibonisa ngaphandle kokumiswa kwamasuntswana emizimbeni. Yonke imithambo, ngoko ke, kuthiwa inolungelelwano omnye komnye.
I-Magnetism ngamandla angaqondakaliyo malunga nohlobo lwenzululwazi ukuza kuthi ga ngoku inika ulwazi oluncinci, nangona ezinye iinyani eziziswa ngamandla omoya ziyaziwa kwizazinzulu. Magnetism ngamandla azibonakalisa ngokusebenzisa oomazibuthe. Imagnethi ngumzimba apho onke okanye amanye amasuntswana afana ngokufana, nalapho izimbambo phakathi kwezibonda kumasuntswana ziphantse zadibana. Izibonda ezintle zamasuntswana ezinama-axes ahambelana ngokulandelelana akhomba kwicala elinye, izibonda ezingalunganga zala macandelo zikhomba kwelinye icala. Umzimba ngumazibuthe, ngokokulungiselela kwangaphambili kwamasuntswana anokufana okanye ii-axes ezifanayo ezihambelana ngokufanayo. Imagnethi isondela kwimfezeko njengemagnethi, ngokomyinge wenani lamasuntswana ayo anjenge-axar kunye ne-axel ehambelana nayo, xa kuthelekiswa nenani lamasuntswana angenazo i-axes ezihambelanayo kwaye angengawo awobumbali. Imagnetism ibonakalisa umzimba ngokomlinganiso wamasuntswana omzimba obuthe gabalala, oko kukuthi, njengobuncinci kunye ne-axes parallel. Magnetism ngamandla akhoyo naphi na emhlabeni, kodwa abonakalisa kuphela imizimba enamalungiselelo emagnethi ezinto zawo. Oku kusebenza kwizinto ezingaphili.
Amandla afanayo aphakanyiselwe kumandla aphezulu kwimizimba yezilwanyana. Imagneti yezilwanyana kukusebenza kwamandla kwimizimba yezilwanyana, xa imizimba ikwisimo esithile esimiselweyo. Indlela eyilwa ngayo amandla emagnethi kufuneka ibe yinto yokuba amasuntswana eseliseleni kunye neeseli zomzimba wesilwanyana ziyinto eyilwe ngayo ukuze amandla omhlaba ajikeleze kuzo. Ukuphelisa loo nto kufuneka ifane nse kumazibuthe angabonakaliyo. I-axis yomzimba wesilwanyana ngumqolo, kwaye imizimba yezilwanyana yimagnethi xa amasuntswana esiseleni ehlengahlengiswa ngokungqinelana nenxalenye ehambelana nomqolo kunye nomongo emathanjeni. Intshukumo evela kwizibonda zomzimba yenziwa ngoxinzelelo. Ibhafu yemagnethi okanye umhlaba ngumhlaba ojikeleze umzimba. Nawuphi na umzimba wezilwanyana oza ngaphakathi kwempembelelo yeli candelo, uva isiphumo samandla kazibuthe ahamba emzimbeni wesilwanyana esibizwa ngokuba yimagnethi.
Imagnetism yezilwanyana ayisiyo eyomntu uqobo, nangona inendima ekuveliseni oko kubizwa ngokuba yimagnethi yobuqu. Imagneti yezilwanyana ayisiyo hypnotism, nangona abantu abanemagneti yezilwanyana banokuyisebenzisa ukuvelisa iziphumo ze-hypnotic.
I-linga sharira, okanye uhlobo olungabonakaliyo lomzimba wenyama, ibhetri yokugcina ubomi. Enye yeendlela apho ubomi busebenza khona yimagnethi. Ukuba i-linga sharira emzimbeni womntu inabalingane bayo bokwakha njengoko kuchaziwe, oko kukuthi, amasuntswana kulungelelaniso lwezibuthe, ngoko iyakwazi ukubamba kwaye igcine ubomi kwaye ingabuhambisa ubomi obuphantsi kwento ebizwa ngokuba yimagneti yesilwanyana.
Impendulo kumbuzo kukuba akukho ubudlelwane ngokuthe ngqo phakathi kokuxhuzula kunye nemagneti yezilwanyana njengoko kuchaziwe. Bahlukile kuba, ukuya kuthi ga ngokuxhuzula, yonke imithamo itsala yonke enye ubunzima, kwaye amandla abizwa ngokuba ngumxhuzulane ayasebenza ngawo onke amaxesha; kodwa amandla abizwa ngokuba yimagnethi yezilwanyana awasebenzi ngalo lonke ixesha, kodwa ayasebenza kwezi zihlandlo kuphela xa kukho into yezilwanyana, ezimpawu ezinje ngokufana kwamasuntswana kunye nomzobo oyinyani okanye olinganayo we-axes.
Imagneti yezilwanyana ngamandla onke ahamba emzimbeni womntu, apho iiseli ziqokeleleke kwaye zilungelelaniswe ngendlela ethile, nto leyo polarization kunye nolungelelaniso zinika ubomi bendalo yonke emzimbeni kwaye zivumele ukuhanjiswa kobomi ngqo komnye umzimba wesilwanyana.
Umzimba onesifo ngumzimba osilela kulungelelwaniso olufanelekileyo lwamasuntswana alo, okanye ikwindawo apho kukho uthintelo ekuhambeni kobomi, okanye ekuye kwenzeka khona utshintsho ngenxa yokungabikho komphefumlo nokujikeleza kobomi okuqhelekileyo. Umntu onobugqi bamandla obukhulu bezilwanyana, kwaye umntu odluliselwa ngokulula ngomlingo wesilwanyana, unokuphilisa izifo kwabanye. Unokuphilisa ngokubakho kwakhe yedwa ngaphandle kokunxibelelana nomzimba, okanye aphilise ngokunxibelelana nomzimba oza kuphiliswa. Xa ukuphiliswa kwenziwa ngokubakho kwalowo uphilisayo kwenziwa ngokubethelelwa kwabagulayo kwindalo ejikeleze leyo iphilisayo. Umoya ojikelezayo kukuhlanjwa kwemagnethi, okuhlawuleliswe ngobomi bayo obusebenza njengemagnethi yezilwanyana. Imagneti yezilwanyana ligama elihlwempuzekileyo kumandla amakhulu obomi bendalo yonke, kodwa siyisebenzisa apha ukuhlala ngaphakathi kokusetyenziswa kwexesha eliqhelekileyo. Igumbi lokuhlambela lisebenza kumoya womntu ogulayo kwaye lijonge ukubuyisa ukujikeleza kwamandla obomi bendalo iphela, ngokususa izithintelo, ukuphinda ujikeleze ukujikeleza, kunye nokuhlengahlengisa kwakhona kweimolekyuli ezikwiseli, ukuze amandla obomi Ukuhamba ngokungagungqiyo kwaye amalungu omzimba avunyelwe ukwenza imisebenzi yawo yendalo.
Ukuphilisa ngokusebenzisa amandla kazilwanyana, xa kusenziwa ngokudibana ngqo nomzimba walowo uphilisayo, kwenziwa kakuhle xa izandla zalowo uphilisayo, esebenza njengezibonda ezichazayo nezingalunganga, zibekwe emzimbeni okanye kwinxalenye echaphazelekayo. Imagnetism isenokuvela kulo naliphi na ilungu lomzimba, njengamehlo, amabele, kodwa eyona ndlela yendalo yokuyisebenzisa isebenzisa izandla. Into ebalulekileyo ekunyangeni ukunyanga kukuba ingqondo yomphilisi akufuneki iphazamise ekuhanjisweni kwemagneti. Ngokwesiqhelo ingqondo iyachaphazeleka kwaye iphazamisane nefuthe lokuphilisa, kuba umphilisi uhlala ethanda ukuba makalathise ukujikeleza kobugqi ngengqondo yakhe. Kuzo zonke iimeko apho umphilisi asebenza ngengqondo yakhe ngokunxulumene nemagnethi, ngelixa azama ukuphiliswa, uya kwenzakalisa, kuba ingqondo ayisichaphazeli unyango, nangona inokuqondisa kwaye ifake imibala yombane. Ingqondo iyaphazamisa kwaye iphazamise isenzo sendalo semagneti. Umazibuthe uya kusebenza ngokwendalo ukuba awuphazanyiswa yingqondo. Indalo, hayi ingqondo, echaphazela unyango. Ingqondo yomntu ayayazi indalo, kwaye ayazi ngokwayo xa isemzimbeni. Ukuba ibizazi emzimbeni wayo ngengqondo ibingazukuphazamisa indalo.